IDRA-21 vovoka (22503-72-6) hplc≥98% | AASraw Nootropika
/ Products / Nootropics vovoka / IDRA-21 vovoka (22503-72-6)
SKU: 22503-72-6. Sokajy: Nootropics vovoka
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny IDRA-21 vovoka (22503-72-6), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
IDRA-21 vidéo vidéo
Rohan'ny IDRA-21 karazany fototra
Name: IDRA-21 vovoka
Formula Molecular: C8H9ClN2O2S
Meny fitetezana 232.69
Vola IDRA-21 roapolo amin'ny fampiroboroboana ny atidoha sy ny fiakarana fanampiny
Ravina IDRA-21 ampiasaina
Amin'izao fotoana izao dia nisy ny fitsapana natao tamin'ny biby, indrindra fa ny gidro sy raty, izay samy naneho ny fanatsarana kognitika izay tsy misy fiantraikany ratsy. Ny doka ho an'ny gidro dia tao amin'ny 3 na 5.6 mg / kg, izay nomena tamin'ny fahalalana fa ny IDRA-21 vovoka dia 10X mahery kokoa noho ny hafa nootropics.
Na dia tsy misy fanadihadiana ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao aza mifantoka amin'ny dosage ho an'ny fanjifana olona, ​​dia misy ireo pejin'ny mpitsidika maromaro maneho hevitra an-tserasera izay manolotra fanandramana tsara rehefa nalaina am-bava ny vovo-dronono IDRA-21. Ny soso-kevitra hampiroborobo ny cognitivefunction dia ao amin'ny 5-25mg.
Ireo toro-lalana ireo dia tokony hodinihina amim-pitandremana, indrindra fa ny vokatry ny IDRA-21 vovoka dia afaka maharitra hatramin'ny ora 48. Raha misy doka amin'ny 5 mg dia raisina, tsy misy fiantraikany eo amin'ny dikan-teny, ny dipoavatra fanampiny rehetra dia tokony ho raisina amim-pitandremana raha toa ka mety hisy fifandimbiasam-potoana ahafahana miteraka olana.
Fampitandremana momba ny vovoantitra IDRA-21
Raha ampitahaina amin'ny hafainganan'ny klasika nootropic, ny IDRA-21 dia tsy misy voka-dratsiny. Raha ny marina dia manao izay tadiaviny hatao izy, amin'ny fanohanana ny fahatsapana, ary ny fampitomboana ny fahafahana hianatra sy tsy manao zavatra hafa. Izany dia manohana bebe kokoa amin'ny tatitra mifototra amin'ny fanadihadiana fikarohana momba ny gidro mpanankarena tanora sy ny fahaiza-mianatra.
Tsara homarihina koa fa ny vokatry ny IDRA-21 dia voadio hatramin'ny ora 48. Ny valin'ny fikarohana dia nampiseho ihany koa fa ny IDRA-21 vovoka dia 10X mahery kokoa fa Aniracetam, izay fanafody prescribed in Europe izay manana toetra mitovy amin'ny INDA-21. Ny vokatry ny IDRA-21 dia mety haharitra hatramin'ny 3 andro raha oharina amin'ny varavarankelin'ny 2-3 ao Aniracetam.
Ny tatitra anekdotal ataon'ny olona izay mampiasa IDRA-21 mena dia nahitana fahatsapana fanahiana sy headache Ity karazana fanehoan-kevitra ity dia noho ny fampiasana ny vovo-dronono IDRA-21 amin'ny olona izay efa niaina mihoatra ny salan'isa ambony na ny fihetsika nivalozana izay tsy misy dikany. Mila mampiasa IDRA-21 vovoka ianao.
Tsara ny manjo ny olona vao haingana; dia tsy tokony hampiasa ny vovony mena IDRA-21 ny tantaran'ny fifindrana na izay mety hampidi-doza. Ny tambajotra vaovao izay efa simba na malemy dia mora simba amin'ny fampiasana ny fanampim-panafody na ny fikambanana izay manentana na mampiroborobo ny asan'ny mpandidy.
Tsy misy torolalana voafaritra manokana momba ny fampiasana poezia IDRA-21 amin'izao fotoana izao amin'ny fampiasana fanafody prescription na ny fiantraikany eo amin'ny toe-pahasalamanao. Saingy ny ahiahy dia natsangana tamin'ny fampiasana ny nootropika amin'ny fotoana mitovy amin'ny fampiasana antidepressantso satria mety hampisy toe-javatra sarotra ny fampifandraisana.
IDRA-21 vovoka dia vondrona vaovao tsy misy dikany. Izy io dia miasa toy ny ampakine fanafody mampikorontana ary amin'izao fotoana izao dia mikaroka momba ny fiantraikany amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tena, ny fampitomboana kognita, ny fanentanana ary ny famerenana ny tsy fahampiana kognitika. Azo inoana fa novolavolaina tao amin'ny 1994 na 1995 ny fitsapana voalohany sy ny fanadihadiana momba ny fikarohana nataon'ireo mpikaroka ao amin'ny pejin'ny 1995.
(1) Mechanical Act of IDRA-21
IDRA dia anisan'ny vondron'olona mifangaro fantatra amin'ny hoe ampakines. Ampakines dia mpanindrahindrana ny AMPA mpitsabo ao amin'ny atidoha. Ireo receptors AMPA dia tompon'andraikitra amin'ny fifindran'ny synaptika haingana ary tafiditra ao amin'ny plastika sy synaptika sy ny fampandrosoana maharitra.
Amin'ny ampakine, IDRA-21 volo matevina dia miasa amin'ny fanodinana ny mpitsabo AMPA ao amin'ny atidoha. Ny IDRA-21 vovoka manokana dia mamehy ny tranonkalan'ny ADO, ary mampirisika modely tsara, indraindray antsoina hoe activation allosterique.
Ny fikarohana voalohany momba ny vovo-dronono IDRA-21 dia manondro fa mety hisorohana ny tsy fahampian-tsakafo AMPA izy io ary hampitombo ny valiny avy amin'ny synaptic ary hanamafisana ny fahatsiarovana sy ny fianarana.
(2) Ahoana no fiasany?
IDRA-21 volo maitso dia ampifandraisina ampakine ary ampakin-kery dia manala ireo receptors ao amin'ny atidoha antsoina hoe AMPA receptors. Ireo tompon'andraikitra ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fampitomboana haingana ny fifandraisana eo amin'ny neurons ao amin'ny atidoha, ary koa ny fanatsarana ny fianarana sy ny fahatsiarovana.
Ny poeta IDRA-21 dia mamehy amin'ireo mpitsabo ao amin'ny atidoha izay mitarika ny saina, fahamalinana ary ny fahatsapana. Manatsara ny vokatry ny neurotransmitter sasany amin'ny atidoha, indrindra fa ny glutamate. Glutamate dia iray amin'ireo 2 mpandinika indrindra ny neurotransmitter hita ao amin'ny atidoha ary tompon'andraikitra amin'ny fisaintsainana haingana, mifantoka amin'ny fifantohana, fahamendrehana tsara kokoa, ary manatsara ny fahaiza-manao manokana.
(3) tombony ho an'ny voly IDRA-21
• Ampitomboina amin'ny fahalalana (Tetikasa mitovitovy tantana nataon'i Rhesus Monkeys)
• Zava-dehibe ny tanjona
• Mitombo ny fahatsiarovan-tena
• Ny fiantraikany ara-pahasalamana mety amin'ny skizophrenia
• Ny fiantraikany ara-pahasalamana mahakasika ny fahaketrahana
• Tombontsoa manohitra ny tsy fahampian-tsakafo Alprazolam
Rohan'ny IDRA-21 Marketing
Ahoana ny hividianana vovo IDRA-21 avy any AASraw
IDRA-21 Fofona ronono volo:
Vola mampidi-doza IDRA-21 tombony